Mukulaal labo waji leh oo ku dhalatay Virginia
Shabkada Maadow :: Qeebta mucjizooyinka aduunka Share |
Subject: Mukulaal labo waji leh oo ku dhalatay Virginia Wed Jul 14, 2010 9:51 pm
Yaanyuurtan labada waji leh oo ku dhalatay Charleston ayey ku sheegeen dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee deegaankaas in jaaniskeeda ay ku noolaan karto in uu yahay 50%. Mukulaashan oo loo bixiyey labo waji leey, ayaa la keenay wax yar kadib markii ay dhalatay xanaanada xoolaha arbacadii la soo dhaafay, sababtoo ah hooyada mukulaashan ayaa diiday in ay xanaaneyso.
Dr Erica Drake ayaa yiri waxa ay ku dhalatay xaalad dhif iyo naadir ah oo loo yaqaano (diprosopus), taas oo macnaheedu yahay waxa ay xaqiiqdii leedahay labo waji iyo labo af. Labo afne waxa ay leeyihiin afar indhood, labo san iyo labo af.
Drake ayaa yiri labada af ee yaanyuurtan waxa ay u shaqeeyaan si kala gooni gooni ah waxa ayna rumeysan tahay in afkasto uu leeyahay cunguri u gooni ah taas oo ay cuntadane hal calool geynayaan. Waxa ay noqoneysaa in la fiiriyo qaab dhismeedka hoose ee yaaanyuurtan sidii la ogaan sida mukulaashan u shaqeyn doonto.
Shabkada Maadow :: Qeebta mucjizooyinka aduunka